ပေါငျ သနျး (၁၅၀) ဖွငျ့ လီဗာပူးအသငျးရဲ့ ကွယျပှငျ့ကစားသမားကို ချေါယူရနျ မကျြစိကနြသေညျ့ ဂြူဗငျတပျဈ။ – SoShwe
Home/Sport/ပေါငျ သနျး (၁၅၀) ဖွငျ့ လီဗာပူးအသငျးရဲ့ ကွယျပှငျ့ကစားသမားကို ချေါယူရနျ မကျြစိကနြသေညျ့ ဂြူဗငျတပျဈ။
ပေါငျ သနျး (၁၅၀) ဖွငျ့ လီဗာပူးအသငျးရဲ့ ကွယျပှငျ့ကစားသမားကို ချေါယူရနျ မကျြစိကနြသေညျ့ ဂြူဗငျတပျဈ။
So Shwe February 3, 2020	Sport Leaveacomment
အီတလီစီးရီးအကေလပျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးသညျ လာမယျ့နှရောသီ၌ လီဗာပူးအသငျးရဲ့ နောကျခံလူ ဗနျဒိုကျချြကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျသနျး (၁၅၀) ဖွငျ့ ကမျးလှမျးရနျပွငျဆငျနပေါတယျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ (၂၀၁၈) ခုနှဈ ဆောငျးရာသီအပွောငျးအရှေ့၌ ဆောကျသမျတနျအသငျးမှ လီဗာပူးအသငျးထံသို့ ပွောငျးရှကွေ့ေးပေါငျ (၇၅) သနျးဖွငျ့ ပွောငျးရှလေ့ာပွီးနောကျပိုငျး ဗနျဒိုကျချြသညျ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကစားသမားမြားထဲမှ တဈယောကျအဖွဈ နခေ့ငျြးညခငျြး ခွစှေမျးပွသနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဗနျဒိုကျချြသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ရာသီက လီဗာပူးအသငျးနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပွီး လကျရှိဘောလုံးရာသီ၌လညျး ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကွီးကို ဆှတျခူးနိုငျရနျအတှကျ အခွအေနကေောငျးမြားကို ပိုငျဆိုငျထားပွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လီဗာပူးအသငျးအနဖွေငျ့ လာမယျ့နှရောသီ၌ အဓိက ကစားသမားတဈဦးကို ဆုံးရှုံးရမညျ့အရေးကို တှေးပူရဖှယျရှိပွီး The Sun သတငျးစာရဲ့ဖျောပွခကျြအရ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးက ဗနျဒိုကျချြကိုချေါယူရနျအတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျသနျး (၁၅၀) ဖွငျ့ ကမျးလှမျးလာမညျဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးသညျ သူတို့ရဲ့နောကျတနျးကို သှေးသဈလောငျးရနျ ပွီးခဲ့သညျ့နှရောသီတညျးက စတငျပွငျဆငျနခေဲ့ပွီး အဂေကျြဈနောကျခံလူ ဒီလဈဂျကိုလညျး ဥရောပထိပျတနျးအသငျးကွီးမြားနဲ့အပွိုငျ စြေးကွီးပေးချေါယူခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးအနဖွေငျ့ လီဗာပူးအသငျးရဲ့ တိုကျစဈကစားသမား ဆာလာကို ချေါယူရနျအတှကျလညျး စိတျဝငျစားနဆေဲဖွဈကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ပေါင် သန်း (၁၅၀) ဖြင့် လီဗာပူးအသင်းရဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမားကို ခေါ်ယူရန် မျက်စိကျနေသည့် ဂျူဗင်တပ်စ်။
အီတလီစီးရီးအေကလပ် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းသည် လာမယ့်နွေရာသီ၌ လီဗာပူးအသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက်ခ်ျကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း (၁၅၀) ဖြင့် ကမ်းလှမ်းရန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် (၂၀၁၈) ခုနှစ် ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့၌ ဆောက်သမ်တန်အသင်းမှ လီဗာပူးအသင်းထံသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင် (၇၅) သန်းဖြင့် ပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက်ပိုင်း ဗန်ဒိုက်ခ်ျသည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားများထဲမှ တစ်ယောက်အဖြစ် နေ့ချင်းညချင်း ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗန်ဒိုက်ခ်ျသည် ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက လီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိဘောလုံးရာသီ၌လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကြီးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ရန်အတွက် အခြေအနေကောင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူးအသင်းအနေဖြင့် လာမယ့်နွေရာသီ၌ အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးကို ဆုံးရှုံးရမည့်အရေးကို တွေးပူရဖွယ်ရှိပြီး The Sun သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက ဗန်ဒိုက်ခ်ျကိုခေါ်ယူရန်အတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း (၁၅၀) ဖြင့် ကမ်းလှမ်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းသည် သူတို့ရဲ့နောက်တန်းကို သွေးသစ်လောင်းရန် ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီတည်းက စတင်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီး အေဂျက်စ်နောက်ခံလူ ဒီလစ်ဂ်ကိုလည်း ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းကြီးများနဲ့အပြိုင် ဈေးကြီးပေးခေါ်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအနေဖြင့် လီဗာပူးအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမား ဆာလာကို ခေါ်ယူရန်အတွက်လည်း စိတ်ဝင်စားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Previous ???????????? ??????????????????????? ????????????? ??????????????????
Next ????????????? ?????????????????????????? ????????????????????